Impahla zoNyango, iimpahla zangaphandle, iiyunifomu zomsebenzi-qiangwei
Isuti enye yokuzahlula
Izambatho ezingaphezulu zesiko
Isinxibo seHangzhou Qiangwei Co., Ltd. ibekwe kwiHangzhou entle, eZhejiang. Yayisungulwa ngo-1997 kunye nenkunzi ebhalisiweyo ye-yuan eyi-110 yezigidi. Kukho iiseti zezixhobo ezingaphezu kwe-600, kwaye zixhotyiswe ngezixhobo zempahla ezingqinelanayo (ezinje: umatshini wokuthunga ohamba ngesantya esiphezulu, umatshini wokufaka, isikere sombane waseMelika, njl.). Ngoku iphuhlise yaba ngumenzi wempahla yobungcali odibanisa uyilo, imveliso kunye nentengiso. Inkampani inabasebenzi abangaphezu kwama-600, indawo yokwakha yeemitha ezili-10,000, kunye nemveliso yonyaka yezigidi ezi-1.2 zeeseti. Ukongeza, inkampani ikwanayo nomzi-mveliso wokuhombisa kunye nomzi-mveliso ongenasinxibo ngaphandle kwengubo.
I-China iye yaba ngoyena mvelisi nomthengisi omkhulu wehlabathi
Ukusukela oko i-China yangena kwi-WTO, amalaphu kunye neempahla ziye zaba yinxalenye ebalulekileyo yokuthumela ngaphandle e-China. Kule minyaka ilishumi idlulileyo, ngokupheliswa ngokuthe chu kwenkqubo yezabelo zokuthumela kumazwe angaphandle, impahla yase China, impahla elukiweyo kunye nempahla ethunyelwa ngaphandle zinendawo engaphandle evulekileyo. Favora ...
Uhlalutyo lokungenisa kunye nokuthumela kwelinye ilizwe kwishishini lempahla lase China e2020
Njengelizwe elikhulu elithumela iimpahla kumazwe angaphandle, isixa semali sonyaka esithunyelwa eTshayina sigqitha kwi-100 yezigidigidi zeedola zaseMelika, yona leyo ingaphezulu lee kunaleyo yokungenisa iimpahla. Nangona kunjalo, ngotshintsho lobume base China kwiminyaka yakutshanje, ishishini lempahla ngokuthe ngcembe lathenga ...
I-China yinto enkulu yokuthumela impahla ngaphandle, kodwa intsalela yorhwebo iyancipha
Njengomthengisi omkhulu wempahla, i-China ithumela ngaphandle ngaphezulu kwe-100 yezigidigidi zeengubo minyaka le, ingaphezulu kunengeniso yayo. Nangona kunjalo, ngokutshintsha kobume bezoqoqosho eTshayina kule minyaka idlulileyo, ishishini lengubo liye langena ngokuthe ngcembe kwinqanaba lokuvuthwa, kwaye iindidi zemveliso zinegr ...
Idilesi: Da 'ilali, isitalato iChongxian, isithili Yuhang, Hangzhou, China